थाहा पाउनुहोस्-आफैँ जाँचेर पत्ता लाग्छ स्तन क्यान्सर
नेपालमा महिलालाई हुने क्यान्सरमध्ये स्तन क्यान्सर दोस्रो नम्बरमा पर्छ । पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सर सबैभन्दा बढी हुन्छ । क्यान्सर भयानक रोग भए पनि समयमै उपचार गरे पूर्ण रूपमा निको हुन्छ । महिलाले वेला–वेलामा आफौ स्तन परीक्षण गरेर क्यान्सर भए/नभएको पहिचान गर्न सक्छन् । निश्चित समयमा यो विधि अपनाउादा ६० प्रतिशत रोग पत्ता लाग्न सफ..
नर्भिकले मनायो विश्व मुटुरोग दिवस, विभिन्न व्यक्ति सम्मानित
काठमाडौ–नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले विविध कार्यक्रमका साथ यस वर्षको विश्व मुटु द..
कतै तपाईंको बियरमा माछा त छैन ?
बियरमा माछा मिसिएको हुन्छ भन्ने बारे सायद धेरै मानिसहरुलाई थाहा नहोला । बेलायतको..
हुन त कम्मर दुख्ने समस्या विशेषगरी ४५–६४ उमेर समूहको मानिसमा पाइन्छ । तर बढ्दो त..
कतै तपाईं प्लाष्टिकको चामल खाइरहनुभएको छैन ? यसरी थाहा पाउनुहोस् भिन्नता
नेपालमा आजकाल मिसावटयुक्त खाद्य पदार्थको बिक्रि सामान्य बनेको छ । हामीले दैनिक ज..
खानाबार : नेवारी खानाका पारखीका लागि हाइल्यान्ड फुड रेस्टुरेन्ट
काठमाडौँ– सबैको मन लोभ्याउने खाना मध्येमा नेवारी खाना पर्दछ । नेवारहरुको विशेष परिकारले नेवारका अतिरिक्त गैरनेवार नेपालीदेखि विदेशीहरुको मनसमेत लोभ्याउने गरेको छ । त्यसमाथि उनीहरुको खाना बनाउने शैली र एउटै चीजलाई विभिन्न सजावटमा पस्किने शैलीले यी परिकारहरु देश विदेशमा समेत प्रसिद्धि कमाएका छन् । अहिले विभिन्न देशमा नेवारी खाजा घ..
ग्यास्ट्राइटिस भए के गर्ने ?
हामीले खाएको खाना आमाशयमा चारदेखि ६ घन्टासम्म रहन्छ । त्यसपछि खाना पचाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । खाना पच्नलाई त्यहाँ विभिन्न पाचन रस आउने गर्छ । त्यसमा पनि हाइड्रोक्लोरिक एसिड र पेप्सिनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यिनीहरूको काम आमाशयमा रहेको खानालाई सहज रूपमा पचाउने हो । यिनीहरूले शरीरका कुनै पनि भागलाई असर नगरी खानालाई पचाउन..
रक्सी सेवन गर्नेको संख्या विश्वभर नै बढ्दो अवस्थामा छ । अझ चिसो बढी हुने मुलुकमा अल्कोहलका अम्मली झन् बढी हुन्छन् । नेपालमा सबैखाले अल्कोहललाई जनाउन ‘रक्सी’ शब्द प्रयोग गरिन्छ । यहाँ झन्डै ३९ प्रतिशत घरधुरीमा रक्सी पिइन्छ । यसमध्ये २८ प्रतिशत महिला रक्सी पिउँछन् । अल्कोहलले जनस्वास्थ्यमा तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा असर पारिरहेको..
मोटोपनाको काल हो जिरा र कागतीको यो प्रयोग, थाहा पाउनुहोस् सरल तरिका
जो मानिसहरु मोटोपनाबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ र त्यसको लागि विभिन्न तरिका अपनाएर थाकिसक्नु भएको छ भने आज हामी तपाईंलाई मोटोपनाबाट छुटकारा पाउने अचुक उपायबारे जानकारी दिदै छौं । निकै साधारणजस्तो देखिने यो प्रयोग अपनाएको थोरै दिनभित्रै तपार्ईले नतिजा देख्नसक्नुहुन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त के छ भने यो तरिका निकै सजिलो छ । आउनुहोस्..
कतिपय युवती यस्ता हुन्छन्, आँखामा गाजल र ओठमा कलर लिपबाम लगाएरै सुन्दरताको आनन्द लिन्छन् । कोही युवती अनुहारको छाला र शारीरिक फिटनेसका लागि खानपान र व्यायाममा दैनिक विभिन्न उपाय अपनाउने पनि गर्छन् । तर, कतिपय युवती भने सुन्दर देखिन अनेक ब्युटी आइटम पछ्याउँछन् । नेपालका युवतीहरू पनि सौन्दर्यको नयाँ ट्रेन्डमा छन् । ब्युटिसियन भावन..
थाहा पाउनुहोस् , बुढ्यौलीमा देखापर्ने रोग-अल्जाइमर्स
अल्जाइमर्सको औषधीय उपचारसँगै बिरामीको हेरचाह र बिरामीलाई सेवा गर्ने परिवारका सदस्य र आफन्तको सहजतासमेत यस रोगको महत्वपूर्ण पक्ष हो । यस रोगको मध्यम तथा अन्तिम अवस्थातिर दैनिक रूपमा बिरामीको सेवा गर्न दिनरात खटिनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरूमा पनि शरीरिक तथा मानसिक थकान बढ्दै जान्छ । त्यसको समयमै निदान नभएमा आफैँमा प्रत्युत्पादक हुनेस..
थाइराइड क्यान्सरका झुक्याउने लक्षण
डा. अविस अधिकारी क्यान्सररोग विशेषज्ञ ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पताल थाइराइड हर्मोन उत्पादन बढी वा कम भए पनि शरीरमा समस्या निम्तिन्छ । शरीरलाई नभई नहुने थाइराइड हर्मोन उत्पादन गर्ने यो ग्रन्थिको महत्व झनै ठूलो छ । यही थाइराइड ग्रन्थिमा विभिन्न समस्या निम्तिने गर्छ । क्यान्सरजस्तो खतरा पनि पैदा हुन्छ । थाइराइड ग्रन्थिमा कसरी हुन्छ क..
पछिल्लो समय बजारमा आएका विभिन्न अध्ययनअनुसार मानिसमा अध्ययनको बानी कम हुँदै गएको तथ्यांक आउन थालेका छन् । मानिसले कम पढिरहेकाले अध्ययन संस्कृति कम भएको तर्क पनि समयसमयमा आउँछन् । तपाईंलाई पनि आफ्नो अध्ययन बानी पहिलेको जस्तो बलियो छैन भन्ने लाग्छ भने यी टिप्सहरूले पुनः त्यो बानी फिर्ता हुन सहयोग गर्न सक्छन् : निश्चित समय दिनुहोस्..
ब्लडप्रेसर सन्तुलनमा राख्न अपनाउनुहोस् दैनिक सूत्र
व्यस्त जीवनशैली र अव्यवस्थित खानपानले अहिले अधिकांश नेपाली युवा अवस्थामै हाई ब्लडप्रेसरको सिकार भएका छन् । हाई ब्लडप्रेसरले हर्टअट्याक, मिर्गौलारोग र दिमागमा स्ट्रोकको खतरा बढ्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । जीवनशैली, खानपान र कतिपय सामान्य बानीमा सुधार गरे ब्लडप्रेसर नियन्त्रणमा राख्न सकिने बेलायतमा भएको एक अध्ययनले देखाएको छ :..
गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले काठमाडौ वाहिरसेवा विस्तार गर्ने
काठमाडौं–मुटुको उपचारमा ख्याति कमाएको काठमाडौको बाँसबारीस्थित शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले काठमाडौ वाहिर पनि सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । गंगालाल अस्पतालको नामले चिनिने केन्द्रले अञ्चल अस्पतालहरुसँग समन्वय गरेर मुटुरोगको सेवा काठमाडौं वाहिर विस्तार गर्ने भएको हो । केन्द्रको संचालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सेवा विस्ता..
चितवन – नेपालमै पहिलोपटक ‘स्क्रब टाइफस’ रोग सार्ने एक प्रकारको किरा ‘माइट’ मा ब्याक्टेरिया (जीवाणु) भएको पुष्टि भएको छ । उक्त ब्याक्टेरियाको नाम वरेन्सिया सुसुगामुसी हो । इपिडिमियोजोजी तथा सरुवा रोग महाशाखाले बाह्य विशेषज्ञसहितको टोली ल्याएर चितवनका मुसामा गरेको अध्ययनबाट यस्तो पुष्टि भएको हो । सन् १९९७ ताका नेपालमा माइट भ..
महिनावारी हुँदा श्रीमती/प्रेमिकालाई यी खानेकुरा खुवाउनुस्, कम हुनेछ दुखाई
महिनावारीको क्रममा महिलाहरुलाई दुखाईका साथै थुप्रै प्रकारको शारिरिक र मानसिक समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ । यदि यी दिनहरुमा खानेकुरामा ख्याल राख्ने हो भने यी समस्याबाट बच्न सकिन्छ । महिनावारी भएका बेला के खानुपर्छ वा श्रीमती र प्रेमिकालाई कस्तो खानेकुरा ख्वाउनुपर्छ भन्ने बारे यहाँ जानकारी दिइएको छ । १. चकलेटः चकलेटमा म्याग्नेसियम र ..
मान्नुहुन्छ, बढी हाँस्नेलाई कम तनाव
हाँसो मानिसको प्राकृतिक स्वभाव हो । जनावर र पशुपक्षी हास्न सक्दैनन् । विशेषत: मानसिक स्वास्थ्यका लागि हाासो अनिवार्य छ । विदेशमा उपचार प्रक्रियामा प्रयोग भएको हास्य चिकित्सालाई नेपालमा पनि स्विकार्न थालिएको छ । जो कसैले सित्तैमा प्राप्त गर्न सक्ने हाासोले औषधिको काम गर्छ भने किन नहाास्ने ? मुख्यत: आधुनिक जीवनमा तनावपूर्ण दैनिकी ..
ब्लडप्रेसर जाँच गर्दा यी कुरामा ध्यानदिनुपर्छ
रक्तचाप परीक्षण गर्दा बोल्न हुँदैन । कम्तीमा पाँच मिनेटको विश्रामपछि मात्र परीक्षण गर्नुपर्छ । हातलाई टेबलमाथि सपोर्ट दिएर राख्नुपर्छ । पहिलोपटक दुवै हातमा नाप्नुपर्छ । प्रेसर बढी भएको हातमा पुनः जाँच लिनुपर्छ । कोठाको वातावरण शान्त र तापक्रम आरामदायी हुनुपर्छ । प्रेसर नाप्नुभन्दा कम्तीमा ३० मिनेटअघिदेखि खाना, चिया, सुर्ती खाएको..
सिन्धुली– यहाँका विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रमा ५० प्रतिशत कर्मचारी अभाव छ । कर्मचारीका अभावमा स्वास्थ्य केन्द्र नै अहिले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ । जिल्लामा सरकारी स्वामित्वका ५५ स्वास्थ्य संस्थामा ३७२ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी भए पनि हाल १४३ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी खाली रहे..
थाहै नपाई अन्धो बनाउने जलबिन्दुबारे १० तथ्य
जलबिन्दु आँखामा निम्तिने गम्भीर प्रकृतिको रोग हो । आँखामा दबाब भएर दृष्टिसम्बन्धी स्नायु (अप्टिक नर्भ)मा क्षति पु-याई अन्धोपन निम्तिनुलाई जलबिन्दु भनिन्छ । प्रारम्भिक चरणमा जलबिन्दुका केही लक्षण देखिने भए पनि कहिलेकाहीँ कुनै पनि लक्षण देखिँदैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर दृष्टि गुमाउने प्रमुख कारणहरूमध्ये जलबिन्दु द..
एक महिनामै दुब्लाउन चाहनुहुन्छ भने छोड्नुहोस् यस्ता सात बानी
आजकाल धेरैजसो मानिसहरु आफ्नो बढिरहेको तौलका कारण चिन्तित छन् । यी मानिसहरु तौल घटाउनका लागि निकै कोशिस पनि गर्छन् तर उनीहरुको कोशिसले रंग ल्याउँदैन । यदि यो सूचीमा तपाईं पनि समावेश हुनुहुन्छ भने एकपटक आफ्नो दैनिक तालिकामाथि निगरानी गर्नुहोस् । कतै तपाईंको बढिरहेको तौल तपाईंको बानीका कारण नै भएको त होइन । भारतीय सिनियर कन्सल्टेन्..
किन खिइन्छ जोर्नी ?
उमेरले ५० वर्ष कटेका मानिसमा जोर्नी खिइन सक्छ । यसको कुनै कारण नै हुँदैन । यस्तो जोर्नी खियाइलाई प्राइमरी ओस्टियोअर्थराइटिस भनिन्छ । घुँडा र पुट्ठामा फ्याक्चर भयो या राम्रोसँग जोडिएन भने पछि गएर जोर्नी खिइन्छ र काम नदिने हुन्छ । यसलाई सेकेन्डरी ओस्टियोअर्थराइटिस भनिन्छ । कसैकसैमा जन्मजात जोर्नी बिग्रिएर आउने हुन्छ । केटी मान्छेम..
कान दुख्ने कारण र बच्ने उपाय
पाँच ज्ञानेन्द्रियमध्ये एउटा महत्वपूर्ण अंग कानले सुन्ने र शरीरलाई सन्तुलन राख्ने काम गर्छ । कानलाई बाहिरी, मध्य र भित्री गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ । यसका यी तीनै भागमा रोग लाग्न सक्छ । बाहिरी भागमा लाग्ने रोगहरू : जन्मजात हुने रोगहरू जस्तै– कान नसुन्ने, कान सानो हुने, कान ठूलो हुने । कानमा संक्रमण हुने […]
अप्रेशन थिएटर होस् त यस्तो पो !
काठमाडौं । अप्रेसन थिएटरमा बिरामी लगेपछि बिरामीको आफन्तलाई यसै त अप्रेसन कस्तो होला, के होला भन्ने चिन्ता, त्यसमाथि औषधी किन्न एकठाउँ, अप्रेशन उपकरण किन्न अर्कोठाउँ, दौडादौड र हैरानी नेपालका अस्पतालहरुमा सामान्य भइसकेको छ । बिरामीलाई अप्रेसनका लागि लगेपछि कुनै तनाव नलिई बिरामीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेर प्रतिक्षा गर्न पाए..